कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (चैत ३१ गते) – इन्सेक
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (चैत ३१ गते)
काठमाडौँ ०७७ चैत ३१ गते
चैत ३१ गते ४ सय ६० जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ लाख ८० हजार ९ सय ८४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत २४ घण्टामा ५ हजार २ सय ३ ओटा नमूना परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्क्रमितमध्ये २ लाख ७४ हजार ३ सय १८ जना निको भएका छन् ।
चैत ३१ गते १ सय ५३ जना निको भएका छन् भने निको हुनेको दर ९७.६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत ३१ गतेसम्म ३ हजार ५८ जना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको अवस्था प्रतिवेदन अनुसार ६० वर्ष माथिका १ हजार ९ सय १८ जनाको मृत्यु कोभिड सङ्क्रमणकै कारण भएको छ । त्यसैगरी ५० वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका ५ सय १३ जना, ४० वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका ३ सय १४ जना, ३० वर्षदेखि ३९ वर्षसम्मका १ सय ८२ जना, २० वर्षदेखि २९ वर्षसम्मका ८५ जना, १० वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका २२ जना र ९ वर्षसम्मका २४ जनाको मृत्यु कोभिड १९ को सङ्क्रमणकै कारण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइसोलेशनमा पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या भनी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ हजार ६ सय ८ देखाइएको छ । चैत ३१ गतेसम्म ६४.७७ प्रतिशत पुरुष र ३५.२३ महिला सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी चैत ३१ गतेसम्म १८ लाख ५० हजार ५ सय ७० जनाले कोभिड १९ विरूद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
पर्सा प्रतिनिधि कृष्णचन्द्र लामिछानेका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमित बीरगंज महानगरपालिका–३ का ६२ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा नारायणी अस्पतालमा चैत ३१ गते मृत्यु भएको छ ।
चैत २९ गते स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका उनको मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोज रोशन दासले जानकारी दिनु भयो ।
अस्पताल भर्ना पश्चात कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि चैत ३० गते पिसिआर विधिबाट उनको थ्रोट स्वाबलाई पीरक्षण गर्दा कोभिड पुष्टि भएको डा. दासले बताउनु भयो । योसँगै पर्सामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्या ५६ पुगेको छ ।
नारायणी अस्पतालमा अहिलेपनि सात जना कोभिड सङ्क्रमितको आइसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको डा. दासले जानकारी दिनु भयो ।
२२ वर्षदेखि ७२ वर्ष उमेर समूह समूहका उनीहरुलाई अहिले अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको उहाँले बताउनु भयो । कोरोनाको पूर्व तयारी अनुरुप अहिले अस्पतालले १७ बेडको एचडीयू युनिट तयार परेको छ ।
डा. दासले एचडीयू युनिटमा भेन्टिलेटर नचाहिने बिरामीलाई राखिने बताउनु भयो । त्यसैगरी अस्पतालमा ६ बेडको कोभिड आइसीयूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड आइसीयूमा भेन्टिलेटर नचाहिने सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गरिने उहाँले बताउनु भयो ।